Kooxaha Real Madrid iyo Manchester United oo wali eeganaya xaalada Cayaariyahan,,, - Jubbaland TV
By admin October 10, 2018 130
Cayaariyahan Mauro Icardi ayaan wali wax wadahadal ah la furanin Kooxdiisa Inter Milan, kaas oo ku aadan heshiis kordhin.
Nerazzurri ayaa hore u sheegtay in aysan marnaba beecin doonin Kabtankeeda Icardi, balse hadii loo baahdo in qandaraaskiisa lagu nasaqi karo lacag dhan $126-million oo dollar.
Maamulka Kooxda Inter Milan iyo Wanda Nara oo ah Xaaska Mauro Icardi ayaa ka arinsan doona toddobaadka soo aadan xaalada Cayaariyahanka, xilli haatan uu gudanaayo waajibaadka Xulkiisa Qaranka Argentina, kadib markii uu dhowr jeer ha kaday wadahadalada labada dhinac.
Si kastaba ha ahaatee’ Kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ayaa weli lala xiriirinayaa Cayaariyahan Mauro, kaas oo Nerazzurri u dhaliyay 112-gool, kaddib 190-kulan oo uu u saftay Kooxdiisa.
The post Kooxaha Real Madrid iyo Manchester United oo wali eeganaya xaalada Cayaariyahan,,, appeared first on Goolasha.live.
Qaar Kamid Ah Garsoorayaal Soomaaliyeed Oo Dhex Dhexaadin Doona Kulanka Ugu Adag Africa Ee………..
Gonzalo Higuain oo laga cabsi qabo inuu seego Kulanka Tottenham
Macalinkaan ayaa noqon doono bedelka xiga ee Conte
Wayihii Messi iyo Andres Iniesta oo caawa dhamaanya xili ay wadajir ugu wada guuleysteen ……….